ယာဉ်မေတာ်တဆ ဖြစ်ခဲ့သူ နှစ်ဦးရဲ့ တစ်မျိုးစီ လှပနေတဲ့ စိတ်ဓာတ် - ThutaSone
ယာဉ်မေတာ်တဆ ဖြစ်ခဲ့သူ နှစ်ဦးရဲ့ တစ်မျိုးစီ လှပနေတဲ့ စိတ်ဓာတ်
August 6, 2019 ThutaSone ဗဟုသုတအစုံ 0
ဒီနေ့မြန်မာနိုင်ငံမှာ ပြသနာ သေးသေးလေးကနေ နှစ်ဦး နှစ်ဖက် မာန်တက်ပြီး အလျှော့မပေးကြလို့ လူသတ်မှုအထိ ဖြစ်နေတာတွေကို စိတ်မကောင်းစရာ တွေ့မြင်နေရပါတယ်…..
ပြီးခဲ့တဲ့ ရက်တွေကလည်း မြေနုကျွန်းလုကြတဲ့ ကိစ္စကြောင့် လူ (၃၀) ကျော် သေတဲ့အထိ ဖြစ်ခဲ့တာ တကယ်ကို စိတ်မကောင်းစရာပါပဲ. . .ဒါတွေဟာ ပြသနာတစ်ခုကို မှန်ကန်တဲ့ နည်းလမ်းနဲ့ မဖြေရှင်းဘဲ ဒေါသရှေ့ထားကြလို့ မဖြစ်သင့်တာတွေ ဖြစ်ခဲ့ရတာပါ…..
ဒီလို ပြသနာတက်တဲ့ကိစ္စတွေနဲ့ ပတ်သတ်လို့ ဒီနေ့ Facebook မှာ တက်လာတဲ့ သင်ခန်းစာယူဖွယ် ဗီဒီယိုတစ်ခု အကြောင်း ပြောပြချင်ပါတယ်. ..ဒီဗီဒီယိုလေးမှာ ယာဉ်မတော်တဆမှု ဖြစ်တဲ့သူ နှစ်ဦးစလုံးရဲ့ လှပတဲ့ စိတ်ထား တစ်မျိုးစီကို တွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်…..
သူတို့နှစ်ယောက်ဟာ လမ်းပေါ်မှာ ကားမောင်းလာရင်း မတော်တဆ ကားချင်း ပွတ်ခဲ့မိကြပါတယ်. ..ဒီလိုဖြစ်တဲ့အချိန်မှာ တစ်ယောက်ကတော့ ဒေါသထွက်ပြီး ဆူပူပြောဆိုနေပါတယ်….
ဒါပေမယ့် တစ်ယောက်ကတော့ ဒီလိုဖြစ်တာဟာ သူ့အမှားလို့ ယူဆပြီး သူ့ကားနဲ့ ချိတ်မိလို့ ဒေါသထွက်နေတဲ့ ယာဉ်ပိုင်ရှင်ကို ဒေါသနဲ့မတုန့်ပြန်ဘဲ ညီရင်းအစ်ကိုတွေလို သဘောထားပြီး ဖက်လှဲတကင်းနဲ့ တောင်းပန်နေတာကို တွေ့ရပါတယ်…..
အဲ့လိုတောင်းပန်လိုက်တော့ ဒေါသထွက်နေတဲ့ လူကလည်း ဒီကောင်ငါ့ကိုတောင်းပန်နေပြီ. .သူဘော်ဒီကလည်း ငါ့ထက်သေးတယ် “တွယ်လိုက်မယ်” ဆိုပြီး အနိုင်ကျင့်တာမျိုး မလုပ်ခဲ့ပါဘူး..တောင်းပန်တာကို လက်ခံပြီး စိတ်လျှော့သွားတာကို တွေ့ရပါတယ်…..
ဒီလိုလေး နှစ်ဦးနှစ်ဖက် ပြေလည်သွားတော့ ဘယ်လောက် အဆင်ပြေလဲဗျာ..ပြသနာသေးသေးလေးကနေ ရိုက်မှု လူသတ်မှုလောက်အထိ ကြီးသွားရတာက အမှားလုပ်တဲ့လူက ကိုယ့်အမှားကို မမြင်ကြဘဲ အတ္တကြီးနေကြလို့ ဖြစ်ကြတာပါ…အမှားလုပ်မိရင်တောင်းပန်လိုက်တာအကောင်းဆုံးပါဘဲ…..။
ကြယ်စင် – မဟာ ခေတ်သစ်မီဒီယာ
မိုးခေါင်မှုတွေကြောင့် ထိုင်းနိုင်ငံ အလယ်ပိုင်းက ရေလှောင်ကန်တစ်ခုအတွင်းမှ ဘုန်းကြီးကျောင်းတစ်ကျောင်း ပြန်လည် ပေါ်ထွက်လာ
ထမင်းကြော်တစ်ပွဲကို ၇၀၀၀ တောင်းတဲ့ မကွေးကားကွင်းနားက ရိုက်စားဆိုင်
အရိ​ေမ​ေတၱယ် ဘုရား႐ွင္​ အားဖူး​ေတြ႔လိုလွ်င္​ လုပ္​ရမည္​့ ”ကုသိုလ္​ (၁၀) မ်ိဳး”